Al-Shabaab oo dad ku xiray Shabeellaha Hoose | Faafan News
Al-Shabaab oo dad ku xiray Shabeellaha Hoose
Wararka naga soo gaaraya degaanada Awdheegle iyo Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi Shabaab ku xir xireen tiro dad ah oo shalay deganadaasi ku soo dhaweeyay ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sidda ay xaqiijiyeen dadka degaanka dadka la xirxiray ayaa waxaa laga qabtay dhammaan degaanadii shalay ay tageen ciidamada dowladda sidda Mubaarak, Ugunji, Awdheegle iyo farsooley.
Dadka Shabaab ay xireen ayaa tiradooda waxa ay kor u dhaafeysaa illaa 20 ruux oo Odayaal iyo dhalinyaro isugu jira, kuwaasi oo hadda ku xiran Awdheegle iyo Mubaarak.
Xariga dadkaan ayaa yimid ka dib markii Al-Shabaab ay dib u qabsadeen deganaadan inay bilaabeen baadigoobka dadkii soo dhaweeyay ciidamada, waxaana dadka qaar saaka ay ka soo saareen Shabaab guryahooda oo ay xabsiga dhigeen.
Qaar ka mid ah dadka degaanka diiday magacooda iyo codkooda in la adeegsado ayaa sidoo kale sheegaya, dadka ay xireen Shabaab qaarkood inay ku eedeeyeen ku lug lahaanshaha hagida ciidankii Danab ee hawlgalkaasi fuliyay ama siinta xogta ku saabsan weerarka.